मध्यरातमा ओली-प्रचण्ड र बादल किन पुगे चन्द्रागिरी ? खुल्यो यस्तो रहस्य — Sanchar Kendra
मध्यरातमा ओली-प्रचण्ड र बादल किन पुगे चन्द्रागिरी ? खुल्यो यस्तो रहस्य
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का २ अध्यक्ष बिहीबार राति एकाएक चन्द्रागिरी पुगेपछि देख्ने मान्छेहरु अचम्ममा परे । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिहीबार राति एकाएक चन्द्रागिरी किन पुगे भन्ने चासो धेरैलाई भए पनि कहिले भने यसबारेमा सुइँकोसम्म पाएनन् ।
खासमा २ अध्यक्षहरु एकआपसमा टोटो हुँदै गएको सम्बन्ध सुधारका लागि केहि नेताहरुसहित चन्द्रागिरी पुगेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार ओली र प्रचण्डसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरु चन्द्रागिरीमा छलफलमा जुटेका हुन् ।
त्यसक्रममा उनीहरुबीच राति अबेरसम्म पार्टी एकता टुंगो लगाउने विषयमा पनि लामो कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको एक वर्ष पुग्दा पनि जिल्ला र त्यसभन्दा तल्ला कमिटीहरुको एकीकरण हुन सकेको छैन ।
पछिल्लोपटक ओली पक्षले माधव नेपाल पक्षलाई पूर्र्वएमालेले पाउने कोटाबाट ७७ मध्ये दुई जिल्ला अध्यक्ष दिएपछि नेपाल आक्रोशित छन् । नेता नेपालले दुवै अध्यक्षलाई सम्मानजनक एकीकरण नभए सबै जिल्लामा सानान्तर कमिटी गठन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
नेपाललाई कसरी चित्त बुझाएर पार्टी एकीकरणलाई टुंगोमा पु¥याउने भन्नेबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण, चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण लगायतको विषयमा पनि छलफल केन्द्रीत रहेको स्रोतको दाबी छ ।
उसो त सत्तारुढ नेकपाभित्रको गुट उपगुटले आन्तरिक बिबादलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । पार्टीको सांगठनिक एकता प्रक्रियामा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच गुटगत तिब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको स्रोत बताउछ
नेकपा सचिवालयभित्र वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको एउटा गुट छ । त्यस्तै अध्यक्ष ओली, महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको अलग्गै गुट छ । त्यस्तै गृहमन्त्री समते रहेका राम बहादुर थापाको भने आफ्नो गुट छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष ओली तथा नेपाल दुवै समूहसँगको समदुरी सम्बन्धमा देखिए पनि थापाको नेकपाभित्र छुट्टै गुट रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले संचारकेन्द्रलाई बताए । तत्कालीन माओवादीमा रहेको उनको अलग्गै गुट अहिले पनि यथावत् छ । तत्कालीन माओवादी विभाजनका बेला मोहन वैद्यसँग लागेका थापा पाँच वर्षपछि बहुमत नेताकार्यकर्ता लिएर पुनः दाहाल नेतृत्वको माओवादीमै फर्केका थिए ।
यसैले पनि पार्टी केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेश कमिटीसम्म र संघीय व्यवस्थापिकादेखि प्रदेशसभासम्म थापा निकट नेताहरूको प्रतिनिधित्व छ । पार्टी उच्च स्रातका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रहेका थापाले तत्काल आफ्नो साथ छोड्न नसक्ने विश्वासमा छन् । त्यही भएर पनि ओलीले थापालाई बेला बेलामा बालुवाटारमा बोलाएर आफूलाई सघाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।